Ampidino Happy Wheels ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (4.20 MB)
Ampidino Happy Wheels,
Happy Wheels, fantatra ihany koa aminny hoe Happy Wheels aminny teny Tiorka, no dikan-tsoratry ny lalao fahaizana miorina aminny fizika malaza aminny finday.
Aorianny fisintomana ny Happy Wheels aminity pejy ity dia afaka milalao avy hatrany ianao nefa tsy mametraka. Mandeha aminny fiara misy kodiarana izahay ao aminny Happy Wheels, lalao fahaiza-manao izay mety ho absurd sy mahafinaritra aminny fotoana iray. Aminny lalao dia omena fotoana isika hisafidy iray aminireo mahery fo samihafa. Aorianny fisafidianana ny maherifonay dia ampisehoantsika ny fahaizanay mihetsika aminny fizarana natao manokana. Ireo fiara ampiasainay aminny lalao dia fiara mahaliana toy ny seza misy kodiarana sy skateboard olona tokana. Ny tanjontsika lehibe indrindra mandritra ny fitondrana fiara miaraka aminireto fiara ireto dia ny tsy fivadibadihana, ny tsy fisianny lozam-pifamoivoizana, ny hahatrarana ny faranny haavony raha tsy tafahitsoka ao anaty lavaka sy fandrika isika. ary lozam-pifamoivoizana no mitranga.
Ao aminny lalao fizika mifototra aminny fizika Happy Wheels dia mihetsika ny maherifonay araky ny fizika ragdoll. Raha lazaina aminny teny hafa, ny rantsambatanireo maherifontsika toa ny sandry sy ny tongony dia afaka miloka malalaka ary afaka manao somersaults ny maherifontsika. Na dia manana sary 2D tsotra aza i Happy Wheels, ny hadalana hataonao aminny lalao dia ampy anao hahafinaritra.
Raha te hampandeha ny Happy Wheels aminny solosainao dia tsy maintsy manaraka ireto dingana ireto ianao:
Unzip ny rakitra archive .zip izay ampidininao avy aminity pejy ity aminny alàlanny Winrar na mpitantana arisiva mitovy aminizany.
Sintomy ary alatsaho ny rakitra .swf ao anaty rakitra arsiva ao aminny tranokala fisokafanao misokatra ary hanomboka hamoaka ny lalao
Haben'ny rakitra: 4.20 MB
Fanavaozana farany: 02-07-2021
slither.io dia lalao bibilava izay mety ho safidy tsara hamonoana fotoana. Slither.io, lalao iray...
Happy Wheels, fantatra ihany koa aminny hoe Happy Wheels aminny teny Tiorka, no dikan-tsoratry ny...
Candy Crush Saga no lalao mahafinaritra indrindra lalao 3 ahafahanao misintona sy milalao...